फणीन्द्र संगम - कान्तिपुर समाचार
फणीन्द्र संगमका लेखहरु :
यतिबेला गाउँको जवानी निख्रिएको छ । सामर्थ्य हराएको छ । विदेश उड्ने अनि सहर पस्ने युवाको यादमा गाउँघर नियास्रिएका छन् । ठूलो सपना बोकेर सहर पस्नेहरूमा रहर त छ, तर गन्तव्य छैन । फर्किऊँ आफू हिँडिरहने गोरेटोले नचिन्ने हो कि ? पँधेरो, चौतारोले ‘को हौ तिमी’ भनेर सोध्ने पो हो कि ? साँच्चै गाउँ बिरानो बनेको छ ।
लेखक नारायण वाग्लेलाई केही वर्षअघि उपन्यास ‘पल्पसा क्याफे’ माथि सिनेमा बनाउने प्रस्ताव आयो । उनले सोचविचार त गरे, तर स्वीकृति दिएनन् । किताबमाथि बनेका धेरैजसो नेपाली सिनेमा ‘फ्लप’ भइरहेकामा उनको अस्वीकृति पो थियो कि !उनी यत्ति भन्छन्, ‘सायद त्यो बेला म तयार थिइनँ ।’
अनिश्‍चयको ताल्चामा बन्दी समय
एक बिहान तरकारी किन्न बाहिर निस्किएको थिएँ । मोटरसाइकल चढेर अनुगमनमा खटिएका प्रहरी उर्दी जारी गर्दै रहेछन्- '९ बजे सबै पसल बन्द गर्ने ! १ मिनेट बढी भयो भने राम्रो हुँदैन है, म फेरि आउँछु नि ।' यो उनी धम्की दिइरहेछन् कि सावधानी गराइरहेछन् ? या त त्रासको थुप्रोमा अर्को त्रास थपेर जाँदै छन् ?
सधैं व्यस्त भिडभाड रहने देशकै प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबार समेत यतिबेला सुनसान र शान्त छ। मंगलबार दिउँसो यहाँ पुग्दा मन्त्रालयभित्रकै सवारीमात्र सीमित रुपमा प्रवेश गरिरहेका थिए। धेरैजसो सवारी कार्यालय अघिल्तिर पार्किङ गरेर राखिएका छन्। सरकारले लकडाउन लागू गरेपछि प्रशासनिक कामकाज ठप्प छन्। यद्यपि केही मन्त्रालयमा भने फाट्टफुट्ट कर्मचारी देखिए। सुरक्षाकर्मीहरु आफ्नो ड्युटीमा सधैंझैं खटिएका थिए। सिंहदरबारभित्रै रहेको रेडियो नेपालका कर्मचारी र पासको सुविधा पाएका व्यक्तिलाई मात्र प्रवेश दिइएको छ। यद्यपि प्रवेशमा सधैंझैं कडाइ गरेको पाइएन।
न्याय निरूपणको याचना
न्याय सेवामा ३० वर्ष बिताएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको उपन्यास ‘कारा’ ३० वर्षअघिकै कथा हो, महिला कैदीबन्दीहरूको । उपन्यासको कथाकेन्द्र कारागार भए पनि महिलाका पारिवारिक र सामाजिक हिंसाको प्रताडनालाई खोतलिएको छ ।